XPE, IXPE Foaming Sheet Extrusion - Sina XPE, IXPE mpamatsy ravin-tsolika mpamatsy, orinasa –Jwell
XPE manasongadina fitaovana: ny firafiny dia singa tsy miankina mihidy-sela, noho izany dia misy koa insulated hafanana, moisturizing asa, raha mampihena ny tabataba sy ny rano fanoherana, miampy ny hafanana fanoherana, fahanterana fanoherana, fanoherana simika, indrindra, mifanaraka amin'ny iraisam-pirenena fitakiana tontolo iainana.
Ny ravin'ny lamba IXPE dia malama, akaiky ary kely ny volo.
Haingam-pandeha R / Min
Fahafahana (Max) Kg / h
Product sakany (mm)
Vokatry ny vokatra (mm)
Herin'ny fahefana (KW)
Ny takelaka manaparitaka XPE dia azon'ny be mpampiasa amin'ny tetik'asa fanamafisam-peo afovoany, tetikasa fantsona, fitoeran-javatra lehibe, sosona mandroso; fonosana kitapo, fonosana ny board circuit mifangaro, kiraro fanatanjahan-tena efa nandroso, cushion ary insulation hafanana ho an'ny fiara, fitaovana haingon-trano, fitaovana mitsingevana ary kasety fandefasana palitao tokana na roa sns.
Ny ravina IXPE dia be mpampiasa amin'ny fananganana, fantsom-panafody simika, tetik'asa mafana, mpamokatra fiara sy sambo, fonosana, fambolena, jono, gym ary kianja mitafo.
JWZ-BMHG30 / 50/100 Machine milomano mitsivalana